Maxaa sii kala fogeynaya DF iyo maamul goboleedyada qaar ee dalka? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maxaa sii kala fogeynaya DF iyo maamul goboleedyada qaar ee dalka?
Maxaa sii kala fogeynaya DF iyo maamul goboleedyada qaar ee dalka?
Waxaa sii kordhaya oo wali aan xal waara laga gaarin khilaafka qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka uu kala dhaxeeyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu uu yahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Dhowr isku day oo la sameeyay laguna doonayay in la isugu soo dhoweeyay maamul goboleedyada iyo Dowladda Dhexe ayaa fashilmay,waxaana hadda Dowlad goboleedyada khilaaf adag uu kala dhaxeeyo Dowladda Federaalka ka mid ah Puntland iyo Jubbaland.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la weydiiyay su’aal ku saabsan asalka khilaafka Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada ayaa sidan ku jawaabay.
“Madaxweynaha JFS,Ra’iisal wasaaraha iyo Taliyaha Nabad sugida ayaa waxay aaminsan yihiin in nidaamka Federaalka Soomaaliya ku habooneyn ee Dowladdii dhexe Markasiga ahayd Xukunka DHexe ka taliska ahaa dalka loo celiyo saasna qabkii,karaamadii iyo Dowladnimadii Soomaaliya ay ku jirto,”
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay ineysan xumeyn in Madaxda Dowladda ay qabaan fikirkaasi balse loo baahan yahay iney fagaaro yimaadaan Bulshada ay ku qanciyaan qaabka ay ku doonayaan in loo fuliyo iyo danta Ummadda Soomaaliyeed ugu jirto.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda ka hor sheegay in damaciisa uu yahay iney dhisaan Dowladd dhexe oo Xoog leh soona celisa sharaftii Qaranimada Soomaaliya.
” Waxay sidoo kale doonayaan in madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay noqdaan sida Guddoomiye gobol oo kale “Governor” mana noqoneyso suurta gal,in nidaamka kaligii taliska ahaa dalka loo celiyo marnaba dhicimeyso,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Hoggaamiyaha Wadajir.
Hadalkaan ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku sheegay wareysi gaar ah uu siiyay Tv-ga Universal ee xaruntiisa dhexe magaalada London ee cariga dalka Ingiriiska,wareysiga siyaasiga ayaa ahaa mid ah dhinacyo badan taabanayay,isagoona kaga hadlay wallaaciisa ku aadan xaaladda Soomaaliya.